【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】အသညျးလုပျငနျးဆောငျတာ စဈဆေးခွငျး (Liver Function Test) အကွောငျးသိကောငျး စရာ | Opinion Leaders
၂) ဗီတာမငျနှငျ့ သတ်တုဓာတျမြားကို သိုလှောငျသိမျးဆညျးပေးခွငျး
၃) သှေးကွောလေးတှေ အရညျမစိမျ့ထှကျအောငျ ထိနျးသိမျးပေးတဲ့ albumin လို့ချေါတဲ့ အသားဓါတျတမြိုးထုတျပေးခွငျး
၄) ခန်ဓာကိုယျအတှကျလိုအပျတဲ့ သှေးခဲစတေဲ့ ပစ်စညျးမြားထုတျပေးခွငျး
၅) ရောဂါခုခံရေးစနဈတှငျ ပါဝငျခွငျး
၆) ခန်ဓာကိုယျမှ မလိုအပျသညျမြားကို စှနျ့ထုတျပေးခွငျး စတဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာမြားစှာကို လုပျဆောငျပေးနတေဲ့ အရေးကွီးအစိတျအပိုငျးတဈခုပါ။
ဒီလိုအရေးကွီးတဲ့အသညျးကောငျးကောငျးအလုပျ လုပျ/မလုပျ ဘယျလိုစဈဆေးမလဲ?
Liver Function Test (LFT) စဈဖို့လိုပါတယျ။
2.အသညျး အငျဇိုငျးမြားစဈဆေးခွငျး (Alanine aminotransferase ALT & asparyate aminotransferase AST)
3.သညျးခွလေမျးကွောငျးအတှကျ စဈဆေးခွငျး (Alkaline phosphatase ALP & Gamma-glutanyl transferase GGT)
4.အသားဓါတျတမြိုးစဈဆေးခွငျး (Albumin) တို့ပါဝငျပါတယျ။
အသညျးလုပျငနျးဆောငျတာ မကောငျးခွငျး (Abnormal Liver Function Test)
1.အဝါဓါတျမြားခွငျး (Raised bilirubin)
Bilirubin အဝါဓါတျဟာ သှေးနီဥလေးတှထေဲက ဟီမိုဂလိုဘငျ ပွိုကှဲရာက ထှကျလာတာပါ။ သှေးထဲမှာ မပြျောဝငျနိုငျတဲ့ unconjugated အမြိုးအစားပါ။ အသညျးက ဒီသှေးထဲမှာမပြျောတဲ့ အဝါဓါတျကို ရမှောပြျောပီး ဆီးထဲ ဝမျးထဲကနေ စှနျ့ထုတျနိုငျအောငျ လုပျဆောငျခွငျး (Conjugation) လုပျပေးတာပါ။ ဒါကွောငျ့ အဝါဓါတျမြားနရေငျ unconjugated or Conjugated ပျေါမူတညျပွီး အကွောငျးရငျး ကှာခွားနိုငျပါသေးတယျ။
- အသညျးပကျြစီးလို့ အဝါဓါတျမြားရငျတော့ Unconjugated ရော Conjugated ရော နှဈမြိုးလုံးတကျတဲ့အပွငျ အသညျး အငျဇိုငျးတှပေါ တကျနမှောပါ။
-သှေးနီဥတှေ အဖကျြခံနရေတဲ့ haemolytic anaemia လို့ချေါတဲ့ သှေးရောဂါတှမှောတော့ unconjugated တှမြေားနမှောပါ။
-သညျးခွလေမျးကွောငျးပိတျမိနတေဲ့ အခွအေနေ cholestatic jaundice မှာတော့ Conjugated တှမြေားနမှောပါ။
2.အသညျး အငျဇိုငျးမြား တကျနခွေငျး (Raised ALT,AST)
အသညျးအငျဇိုငျးတှေ နှဈဆထကျပိုတကျနရေငျတော့ အသညျးပကျြစီးနပေါပီ။
အသညျး အငျဇိုငျး တကျတဲ့ပမာဏပျေါမူတညျပွီး အသညျးထိခိုကျရတဲ့အကွောငျးရငျးလညျး ကှာနိုငျပါတယျ။
<100 U/L ဆိုရငျတော့
-B ပိုး Cပိုးကွောငျ့ အသညျးပကျြစီးခွငျး
-Haemochromatosis လို့ချေါတဲ့ အသညျးမှာ သံဓါတျတှေ စုပုံခွငျး
100-300 U/L ဆိုရငျတော့-
-အရကျကွောငျ့ အသညျးရောငျခွငျး (Alcoholic hepatitis)
-အရကျကွောငျ့မဟုတျသော အသညျးရောငျခွငျး (Non alcoholic steatohepatitis)
-ခုခံအားစံလှဲမှားလို့ဖွဈတဲ့ အသညျးရောငျခွငျး (Autoimmune hepatitis)
-အသညျးမှာ Copper မြားစုပုံခွငျး (Wilson disease)
>300 U/L ဆိုရငျတော့-
-ဆေးကွောငျ့ ရုတျတရကျအသညျးပကျြစီးခွငျး (Paracetamol induced)
-အဆိပျ သငျ့ခွငျး (Amantia phalloides poisoning)
-virus ပိုးမြားကွောငျ့ အသညျးရောငျခွငျး (Acute viral hepatitis)
-B ပိုး ပွနျကွှခွငျး (Flare up)
-အသညျး သှေးအိုငျခွငျး 'Ischaemic liver
(အရကျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အသညျးရောဂါမှာတော့ AST က ALT ထကျနှဈဆနီးပါးတကျနတောတှရေ့မှာပါ။)
3.Alkaline phosphatase ALP & GGT
GGT တမြိုးတညျးတကျနရေငျတော့ အရကျနဲ့ အသညျးကို ထိခိုကျစတေဲ့ဆေးတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ALP ရော GGT ပါ အဆမြားစှာတကျနရေငျတော့ သညျးခွလေမျးကွောငျးပိတျလို့ဖွဈတဲ့ Obstructive or cholestatic jaundice စဉျးစားရမှာပါ။ဝမျးဗိုကျ အာထရာဆောငျးရိုကျကွညျ့ပီး သညျးခွလေမျးကွောငျး ကယျြ/မကယျြ စဈဆေးပီး လိုအပျတာတှဆေကျလကျစဈဆေးဖို့လိုမှာပါ။
4.အသားဓါတျ စဈဆေးခွငျး (Albumin)
Albumin ဟာ အသညျးကအမြားဆုံးထုတျ ပေးတာဖွဈပီး သှေးကွောတှဆေီက အရညျမစိမျ့ထှကျအောငျ လုပျပေးတာပါ။ နာတာရှညျ အသညျးပကျြစီးတဲ့သူတှမှော Albumin လို့ချေါတဲ့ အသားဓါတျ နညျးနတော တှရေ့မှာပါ။ဒါကွောငျ့ နာတာရှညျအသညျးပကျြစီးတဲ့သူတှမှော ရဖေငျြးဆှဲ ခွငျး ဖောရောငျခွငျး တှရေ့တာပါ။
အသညျးပကျြစီးတဲ့သူတှမှော အရေးကွီးတဲ့ စဈဆေးမှုတဈခုကတော့ coagulation profile(PT, APTT, INR) စဈတာပါ။ အသညျးဟာ သှေးခဲခွငျးဖွဈစဉျမှာပါတဲ့ factors တျောတျောမြားမြားကို ထုတျပေးပါတယျ။ အသညျးပကျြစီးတဲ့သူတှမှော ဒီ factors တှမေထုတျနိုငျလို့ အထူးသဖွငျ့ Vitamin K dependent factors (II, VII, IX, X) လြော့နညျးနလေို့ PT (INR) ပိုကွာရှညျနမှောပါ။သာမနျလူတှထေကျ သှေးထှကျနိုငျခွပေိုမြားပါတယျ။ PT (INR) စဈခွငျးဖွငျ့ အသညျးပကျြစီးတာကိုလညျး သိနိုငျပါတယျ။
အသည်းဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့
၁) အစာအာဟာရများ ဖြစ်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပရိုတိန်း နဲ့ အဆီတွေရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေလုပ်ဆောင်ခြင်း
၂) ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းပေးခြင်း
၃) သွေးကြောလေးတွေ အရည်မစိမ့်ထွက်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ albumin လို့ခေါ်တဲ့ အသားဓါတ်တမျိုးထုတ်ပေးခြင်း
၄) ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ သွေးခဲစေတဲ့ ပစ္စည်းများထုတ်ပေးခြင်း
၅) ရောဂါခုခံရေးစနစ်တွင် ပါဝင်ခြင်း
၆) ခန္ဓာကိုယ်မှ မလိုအပ်သည်များကို စွန့်ထုတ်ပေးခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အသည်းကောင်းကောင်းအလုပ် လုပ်/မလုပ် ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ?
Liver Function Test (LFT) စစ်ဖို့လိုပါတယ်။
2.အသည်း အင်ဇိုင်းများစစ်ဆေးခြင်း (Alanine aminotransferase ALT & asparyate aminotransferase AST)
3.သည်းခြေလမ်းကြောင်းအတွက် စစ်ဆေးခြင်း (Alkaline phosphatase ALP & Gamma-glutanyl transferase GGT)
4.အသားဓါတ်တမျိုးစစ်ဆေးခြင်း (Albumin) တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ မကောင်းခြင်း (Abnormal Liver Function Test)
1.အဝါဓါတ်များခြင်း (Raised bilirubin)
Bilirubin အဝါဓါတ်ဟာ သွေးနီဥလေးတွေထဲက ဟီမိုဂလိုဘင် ပြိုကွဲရာက ထွက်လာတာပါ။ သွေးထဲမှာ မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ unconjugated အမျိုးအစားပါ။ အသည်းက ဒီသွေးထဲမှာမပျော်တဲ့ အဝါဓါတ်ကို ရေမှာပျော်ပီး ဆီးထဲ ဝမ်းထဲကနေ စွန့်ထုတ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း (Conjugation) လုပ်ပေးတာပါ။ ဒါကြောင့် အဝါဓါတ်များနေရင် unconjugated or Conjugated ပေါ်မူတည်ပြီး အကြောင်းရင်း ကွာခြားနိုင်ပါသေးတယ်။
- အသည်းပျက်စီးလို့ အဝါဓါတ်များရင်တော့ Unconjugated ရော Conjugated ရော နှစ်မျိုးလုံးတက်တဲ့အပြင် အသည်း အင်ဇိုင်းတွေပါ တက်နေမှာပါ။
-သွေးနီဥတွေ အဖျက်ခံနေရတဲ့ haemolytic anaemia လို့ခေါ်တဲ့ သွေးရောဂါတွေမှာတော့ unconjugated တွေများနေမှာပါ။
-သည်းခြေလမ်းကြောင်းပိတ်မိနေတဲ့ အခြေအနေ cholestatic jaundice မှာတော့ Conjugated တွေများနေမှာပါ။
2.အသည်း အင်ဇိုင်းများ တက်နေခြင်း (Raised ALT,AST)
အသည်းအင်ဇိုင်းတွေ နှစ်ဆထက်ပိုတက်နေရင်တော့ အသည်းပျက်စီးနေပါပီ။
အသည်း အင်ဇိုင်း တက်တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အသည်းထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်း ကွာနိုင်ပါတယ်။
<100 U/L ဆိုရင်တော့
-B ပိုး Cပိုးကြောင့် အသည်းပျက်စီးခြင်း
-Haemochromatosis လို့ခေါ်တဲ့ အသည်းမှာ သံဓါတ်တွေ စုပုံခြင်း
100-300 U/L ဆိုရင်တော့-
-အရက်ကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း (Alcoholic hepatitis)
-အရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းရောင်ခြင်း (Non alcoholic steatohepatitis)
-ခုခံအားစံလွဲမှားလို့ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောင်ခြင်း (Autoimmune hepatitis)
-အသည်းမှာ Copper များစုပုံခြင်း (Wilson disease)
>300 U/L ဆိုရင်တော့-
-ဆေးကြောင့် ရုတ်တရက်အသည်းပျက်စီးခြင်း (Paracetamol induced)
-အဆိပ် သင့်ခြင်း (Amantia phalloides poisoning)
-virus ပိုးများကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း (Acute viral hepatitis)
-B ပိုး ပြန်ကြွခြင်း (Flare up)
-အသည်း သွေးအိုင်ခြင်း 'Ischaemic liver
(အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောဂါမှာတော့ AST က ALT ထက်နှစ်ဆနီးပါးတက်နေတာတွေ့ရမှာပါ။)
GGT တမျိုးတည်းတက်နေရင်တော့ အရက်နဲ့ အသည်းကို ထိခိုက်စေတဲ့ဆေးတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ALP ရော GGT ပါ အဆများစွာတက်နေရင်တော့ သည်းခြေလမ်းကြောင်းပိတ်လို့ဖြစ်တဲ့ Obstructive or cholestatic jaundice စဉ်းစားရမှာပါ။ဝမ်းဗိုက် အာထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်ပီး သည်းခြေလမ်းကြောင်း ကျယ်/မကျယ် စစ်ဆေးပီး လိုအပ်တာတွေဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုမှာပါ။
4.အသားဓါတ် စစ်ဆေးခြင်း (Albumin)
Albumin ဟာ အသည်းကအများဆုံးထုတ် ပေးတာဖြစ်ပီး သွေးကြောတွေဆီက အရည်မစိမ့်ထွက်အောင် လုပ်ပေးတာပါ။ နာတာရှည် အသည်းပျက်စီးတဲ့သူတွေမှာ Albumin လို့ခေါ်တဲ့ အသားဓါတ် နည်းနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့် နာတာရှည်အသည်းပျက်စီးတဲ့သူတွေမှာ ရေဖျင်းဆွဲ ခြင်း ဖောရောင်ခြင်း တွေ့ရတာပါ။
အသည်းပျက်စီးတဲ့သူတွေမှာ အရေးကြီးတဲ့ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကတော့ coagulation profile(PT, APTT, INR) စစ်တာပါ။ အသည်းဟာ သွေးခဲခြင်းဖြစ်စဉ်မှာပါတဲ့ factors တော်တော်များများကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အသည်းပျက်စီးတဲ့သူတွေမှာ ဒီ factors တွေမထုတ်နိုင်လို့ အထူးသဖြင့် Vitamin K dependent factors (II, VII, IX, X) လျော့နည်းနေလို့ PT (INR) ပိုကြာရှည်နေမှာပါ။သာမန်လူတွေထက် သွေးထွက်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ PT (INR) စစ်ခြင်းဖြင့် အသည်းပျက်စီးတာကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။